Radio Don Bosco - Papa François: Vavaka ho an'i Syrie sy Yemen
Nofidiany manokana ireo firenena 2 ireo noho izy ireo anjakan’ny ady ka mahatonga ny toe-draharaha mahaolona ho tandindomin-doza. Notsiahivin’i Papa tamin’io ny hisian’ilay fikaonadoha faha-4 ho tanterahina any BRUXELLES rahampitso talata, hanindihana ny momba an’i SYRIE. Fikaonandoha izay antenaina fa hanatsara ny toe-draharaha iainan’ny vahoaka siriana sy ireo mpifanolobodi-rindrina aminy, toa ny ao Liban. Tompo-marika amin’ny fikarakarana izany ny Vondrona Eraopeana sy ny Firenena Mikambana. Tsiahivina fa efa nahazoana vola 7 miliara dolara ny fivoriana notanterahina tahaka izao tamin’ny taon-dasa ka nahafahana nanampy ny vahoaka siriana izany. Nanentana mba hivavaka ho an’ny vahoaka any YEMEN koa ny Papa, indrindra ho an’ny ankizy izay tena lasibatra amin’ny krizy vokatry ny ady an-trano any an-toerana, nanomboka ny taona 2014. Vao tsy ela akory izay no nampitandrina amin’ny fisian’ny tsy fanjarian-tsakafo mahazo ny ankizy yéménites ny UNICEF. Ankoatra an’i SYRIE sy YEMEN, nangata-bavaka ho an’ny mponina lasibatry ny tondradrano any amin’ny faritra andrefan’i UKRAINE koa i Papa François tamin'io omaly io.